Anyị na-eche ihu | ECommerce ozi ọma
Anyị na-eche ihu
Nsogbu ahụike nke Covid-19 coronavirus kpatara ebibila ma daa n'ofe mba ahụ. Enwere ọtụtụ ndị ọ metụtara metụtara nke ga-eji nke nta nke nta wughachi onwe ha. N'ihi ọnọdụ a, a nwa amaala, mmekọrịta mmadụ na ibe ya nke ebumnuche ya bụ igosi onyinye ndị ụlọ ọrụ na-ahụ maka ọrụ na mgbake nke omume na akụ na ụba Spanish. A maara njem ahụ site na aha Damos La Cara.
1 Ọnọdụ nsogbu akụ na ụba na ahụike
2 Onye mebere mmegharị Damos La Cara
3 Ebumnuche nke mmegharị Damos La Cara
Ọnọdụ nsogbu akụ na ụba na ahụike
Ọ dịghị ihe ọzọ ị ga-ahụ karịa na Spen niile, 89% nke ụlọ ọrụ ndị ezinụlọ ha nwekwara ebumnuche siri ike nke metụtara ọtụtụ mkpakọrịta mpaghara nke azụmahịa ezinụlọ mejupụtara. Azụmaahịa ezinụlọ a atụpụtala iji anya nke uche hụ ihe ndị mmekọ niile mere iji nye nkwado zuru oke maka nsogbu ahụike na nke akụ na ụba. Ọ bụ otu mmekọrịta mmadụ na ibe ya anaghị akwụsị ito nyere nnukwu nnabata ọ na-eme, ebe ọ bụ ihe ndabere nke ọnọdụ siri ike itinye aka n'ọgụ iji nwetaghachị ala niile nje a naara anyị.
En Anyị na-enye ihu ha bụ ihe karịrị ụlọ ọrụ 1.400 sitere na Spain niile na-ezukọta na ebumnuche nke imeri nsogbu akụ na ụba na ahụike. Ekwesiri iburu n'uche na ulo oru ndi mmadu di nkpa iji dozie onodu a di egwu, ebe obu na ndi oru oha obodo agaghi enwe ike iweghara ha. Ọzọkwa, 67% nke ọrụ niile nzuzo na Spain bụ azụmaahịa ezinụlọ. Nke a na - eme ka ha rụọ ọrụ dị mkpa na nchọta maka azịza ogologo oge.
Onye mebere mmegharị Damos La Cara
Ndi otua mejuputara ndi mmadu a. Ndị ụlọ ọrụ ndị a na-atụsi ike na akụ na ụba na akwa na-arụpụta. Azụmaahịa ezinụlọ nwere ogologo ndụ ma nwee ntụkwasị obi nye ụmụ amaala. Nke a gosipụtara na nkwụsi ike na ịdị n'otu dị ukwuu n'oge nsogbu.
Ndabere nke mmegharị nke Damos La Cara bụ ime ka a mata njiri mara nke azụmaahịa ezinụlọ: ọhụụ ogologo oge. A ghaghi iburu n'uche na oru ndi nwere ezigbo uru na afọ ojuju choro ochicho di ogologo. Oge zuru ezu iji tọọ ntọala siri ike nke nwere ezigbo ụlọ nwere ike ịkwagide oge. Ọnụ ọgụgụ ka ukwuu nke ọrụ ndị azụmahịa ezinụlọ na-achịkwa nyochaa ma duzie ya ruo ọgbọ atọ nke otu aha nna. Nke a na-egosi ntinye aka nye nwa amaala na ọkwa kachasị elu gbasara ọrụ, gburugburu ebe obibi, isi teknụzụ, nchekwa, ntụkwasị obi, wdg.
Ebumnuche nke mmegharị Damos La Cara
Ebumnuche bụ isi nke Damos La Cara bụ iji gosipụta ọtụtụ ọrụ azụmahịa ezinụlọ. Companieslọ ọrụ ndị a bụ ụlọ ọrụ ndị gbara narị afọ gara aga na-emegharị maka ọnọdụ akụ na ụba ọhụrụ na teknụzụ ọhụrụ. Maka nke a, ha chọrọ ọtụtụ ọgbọ nwere ike melite arụmọrụ ma gbanwee ọrụ iji gboo mkpa na atụmanya nke ụmụ amaala. Akụkụ nke usoro a bụ atụmatụ ọhụụ nke bụ ndị na-ewebata mgbanwe na mmepe teknụzụ, nkwado na mba ụwa ke mbubehe ubon. Ihe a niile na-echebara na ọ na-echekwa mgbọrọgwụ na isi obodo dị na ebe o si.
Ebumnuche ọzọ nke Damos La Cara bụ ịkwalite mmụọ azụmaahịa nke ọgbọ ọhụrụ, ebe ọ bụ na ọ bụrụla otu n'ime ogidi ntọala maka mgbake nke ọha mmadụ na akụnụba.
Ihe kpatara nsogbu Damos La Cara ji buru isi bu ihe ndia:
Na Spain 89% nke ụlọ ọrụ nwere ezinụlọ.
67% nke ọrụ onwe na Spain na-akpata site na azụmaahịa ezinụlọ.
Azụmaahịa ezinụlọ na-enye 57,1% nke GDP na mba anyị.
Ogologo oge nke azụmaahịa ezinụlọ bụ afọ 33, ebe na azụmaahịa ndị na-abụghị nke ezinụlọ, nkezi bụ afọ iri na abụọ.
Azụmaahịa ezinụlọ egosila na ha bụ ndị na-akwado nkwado, ndị na-akwụsi ike na ndị etinyegoro ego n'oge nsogbu.
Otu n'ime ihe atụ pụtara ìhè nke azụmaahịa ezinụlọ ndị sonyere na njem Damos La cara bụ Otu Serra. Ọ bụ azụmahịa ezinụlọ na-arụ ọrụ na otu nkwukọrịta ebe akwụkwọ akụkọ Ultima Hora dị. Ebumnuche nke Serra Group bụ iji nye ozi ahụ uru ọ bara na-agụghị onye na-agụ ya gbasara ọrịa na-efe efe. Iji mee nke a, ọ na-agbasi mbọ ike, na-ewere usoro nchekwa niile maka ndị ọrụ ya ma na-ekwe nkwa ịnyefe ozi ziri ezi.
Pathzọ zuru ezu na edemede: ECommerce ozi ọma » Eziokwu na akụkọ » Anyị na-eche ihu